Canned Tomato Paste Vatengesi uye fekitori - China Canned Tomato Namatira Vagadziri
Tomato paste ndeimwe yezvokudya zvezuva nezuva. Inogona kuita kuti chikafu chive chinonaka uye chine hutano kuvanhu. Tinogona kuita mhando dzakasiyana zvichienderana nezvinokumbirwa nevatengi uye musika mhando yemhando, iyo puru yakajairika matomatisi echisikirwo mutsvuku, 100% isina zvinowedzerwa, gobvu uye isina mvura. Tinogona kuita GINO yemhando yemadomasi. "Hunhu hwekutanga" inogara iri chirevo chedu chekugadzira madomasi. Fekitori yedu inofukidza nharaunda yemazana mashanu emazana emazana emazana emazana mashanu emazana emamirimita, kugadzirwa kwegore rino kuri matani 65,000, isu hav ...